The 47: August 2011
Aung San Hall
ဂုဏ်ယူမဆုံး အမိစစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ဖခင်
နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဆင့် က တက်ရောက် ကျောင်းဆင်း ပေးရသည့် အရှေ့တောင် အာရှ တွင် တစ်ခုတည်းရှိသော စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီး မှ ကျောင်းဆင်း နော...
The Defence Services Academy in Pyin Oo Lwin, is the premier military service academy of Myanmar, training future officers for all three br...
စစ်တက္ကသိုလ်မှ ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ထားသည့် MTV သီချင်းများ
ချယ်ရီမြေဖွား စိတ်ဓါတ်များ စစ်တက္ကသိုလ်မြေ ကျောင်းဆင်းနေ့ The Triumphant Elite of the Future @ မြ...
စစ်တက္ကသိုလ် - ၁ စစ်တက္ကသိုလ် - ၂
နျူကလီးယား=ယူရေနီယမ် ( Uranium )
ယူရေနီယမ် ( Uranium )သည် အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၉၂ ဖြစ်ပြီး ၊အင်္ဂလိပ် အတိုကောက် သင်္ကတေ U ဖြင့် သတ်မှတ် သည်။ ယူရေန...
စစ်တက္ကသိုလ် ရွှေရတု နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်း
၄၇ မှတ်တမ်း (၁)
စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် (၄၇) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကို ၂၀၀၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ပြီး (၃)နှစ်တိုင်တိုင် စစ်ပညာနှင့် စာပေသိပ္ပံပညာရပ်များကို သင်...
Photos In DSA
ဘဝဟူသည် အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းသော ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘဝကို ရုန်းကန်မှုဟူ၍ ကျွန်တော်အမည်တပ်ချင်သည်။ ကျွန်တော် လူမှန်းသိတတ်စအရွယ...
၄၇ မှတ်တမ်း (1)
Defence Services Academy (6)
မိုးခလုလင် ၏ ဆောင်းပါးများ (1)
၄၇ သို့ အမှတ်တရ
Mission of DSA
Post တင်သူ : Anonymous , အချိန် 3:26 PM Wednesday, August 10, 2011 0
Labels: မိုးခလုလင် ၏ ဆောင်းပါးများ
Post တင်သူ : Admin , အချိန် 12:37 PM Monday, August 8, 2011 6
စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် (၄၇) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကို ၂၀၀၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ပြီး (၃)နှစ်တိုင်တိုင် စစ်ပညာနှင့် စာပေသိပ္ပံပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျောင်းဆင်းပွဲကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့သည်။ စစ်တက္ကသိုလ်သမိုင်းတွင် အမှတ်စဉ် (၄၇) သင်တန်းသည် အထူးခြားဆုံးနှင့် သင်တန်းသားအများဆုံး (ကျောင်းဆင်း အင်အား ၂၉၆၇ ဦး) အမှတ်စဉ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ကျောင်းဆင်းခဲ့သည်မှာ (၇) နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆင်းအမှတ်စဉ်များသည်ပင်လျှင် (၅၃)ခု မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့အမှတ်စဉ်မှ ညီနောင်များသည်လည်း နေရာဒေသအသီးသီးတွင် စစ်ဘက်၊ နယ်ဘက်ဝန်ကြီးဌာနများ၌ ကျရာတာဝန်များကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင် လျှက်ရှိကြ ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် စစ်တက္ကသိုလ်အမှတ်စဉ်(၄၇) သင်တန်းဆင်း (၂) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် နေ့အထိမ်းအမှတ် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဇိနမာန်အောင်ကျောက်တောင်စေတီတော်ကြီး မဟာရံတံတိုင်း (၁၃) ခန်း အတွက် အောင်စစ်သည် ဗိုလ်ကြီး မှဦးစီး သော စစ်တက္ကသိုလ်အမှတ်စဉ် (၄၇)သင်တန်း၊ ဘာသာစကားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) မှသင်တန်းသားများမှ အလှူတော်ငွေ (၆၇၀၀၀၀ - ခြောက်သိန်း ခုနှစ်သောင်းကျပ် တိတိ)၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာအတွက် အလှူငွေ (၃၀၀၀၀၀ - ကျပ်ငွေ သုံးသိန်းတိတိ)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ မျက်မမြင် ပရဟိတကျောင်းသို့ အလှူငွေ (၃၀၀၀၀၀ - ကျပ်ငွေ သုံးသိန်းတိတိ) ဖြင့် စုစုပေါင်း ကျပ်ငွေ (၁၂ သိန်း၊ ၇ သောင်း ) အားလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ ကျောင်းဆင်း (၄)နှစ်ပြည့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်သို့ အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းခံရသောနေ့ အထိမ်းအမှတ် အနယ်နယ်အရပ်ရပ် တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပါသော စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ်(၄၇) သင်တန်းမှ ပြင်ဦးလွင် မိုးကုတ်ရိပ်သာတွင် ကျောက်ဆင်းတုတော်တစ်ဆူ နှင့် ပြင်ဦးလွင် ဒိုးပင်ပရဟိတ ကျောင်း (၂)ထပ်ဆောင် ၁ခုဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြရာ လှူဒါန်းငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း တစ်ရာ ခန့်လှူဒါန်း နိုင်ခဲ့ကြပါ သည်။
Labels: ၄၇ မှတ်တမ်း
Post တင်သူ : Admin , အချိန် 12:52 PM Saturday, August 6, 2011 3
The Defence Services Academy in Pyin Oo Lwin, is the premier military service academy of Myanmar, training future officers for all three branches of Burmese military. The Ministry of Defence administered academy offers bachelor's degree programs in liberal arts, combined physical sciences, and computer science. As of 52th intake in 2010, the academy is open only to male applicants.
The DSA graduates are commissioned in one of the three branches of Burmese military. The country's premier military training school has produced many of the top military officers of Burmese military.
The DSA was established in Fort Ba Htoo in southern Shan State in 1954, and was moved to its current home,aformer British hill station of Pyinoolwin (formerly, Maymyo) in June 1957. First commander of DSA was Col. L. Khon Naung.
As the country's most prestigious military academy, the DSA receives many applications from high school graduates each year. Unlike at most other Burmese universities, the selection process goes beyond the matriculation exam marks, including physical fitness tests, teamwork and comradeship screening, psychometric assessments and general interviews. The academy is open only to male applicants.
The DSA offers four-year bachelor's degree programs in liberal arts, combined physical sciences (with specializations in areas such as chemistry, physics, mathematics, geology) and computer science. The undergraduate degree programs used to take4years but from the 42nd intake onwards, the duration has been reduced to3years. The DSA comprises two main branches: the academic wing and the training wing.
Labels: Defence Services Academy
Post တင်သူ : Admin , အချိန် 10:20 AM Friday, August 5, 2011 0
စစ်တက္ကသိုလ် - ၁
စစ်တက္ကသိုလ် - ၂
Post တင်သူ : Admin , အချိန် 1:13 PM Tuesday, August 2, 2011 0
Main Entrance to the DSA
Hostels for Cadets
The Hill Where Cadets Live
Intake' Web Pages in DSA
DSA 27th Intake's Facebook
DSA 38th Intake's Facebook
DSA 43rd Intake's Facebook
DSA 47th Intake's Blog
DSA 49th Intake's Blog
DSA 50th Intake's Facebook
DSA 51st Intake's Blog
DSA 53rd Intake's Blog
The 47 © 2011 | Web Design by မီးပြတိုက်